Chii chinonzi IBI: mhando dzeBI uye maitiro ekuti uverenge mumba mako | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi IBI
Encarni Arcoya | | Mitero
MuSpain kune mitero yakawanda yakasiyana inogona kukutsvaira kana zvasvika pakuzvibhadhara. Imwe yeanonyanya kuzivikanwa ndeye, pasina kupokana, iyo IBI inobhadhara iyo real estate iyo iyo yaunayo.
Asi, Chii chakanyanya IBI? Kana iwe uchida kuziva zvese izvo uyu mutero unogona kukukanganisa iwe, pamusoro pekuziva maverengero uye kuziva mhando dzakasiyana dzeIBI dziripo, usazeze kuenderera mberi kuverenga iro ruzivo ratakugadzirira iwe.
1 Chii chinonzi IBI
2 Maitiro eBI akaverengerwa
3 Nguva yekubhadhara
4 IBI mhando
4.1 "Yakakosha" yemaguta real estate
Iyo IBI ndiyo chaiyo iri Real Estate Mutero, inowanzozivikanwa nekutanga kwayo. Iwo mutero unomanikidzwa uyo unobvisirwa pamuridzi weiyo pfuma iyo kodzero dzepfuma dzakachengeterwa, pamwe neiyo usufruct, nzvimbo yepamusoro uye pechibvumirano chekutonga pazvivakwa.
Mune mamwe mazwi, chinzvimbo chinofanirwa kubhadharwa kuve neyako pfuma, ingave imba, chivakwa, imba ye rustic ...
Iwo mamasipala anoverengera mutero uyu, kunyangwe ivo vachigona kuendesa manejimendi kune mamwe masangano ekuunganidza. Parizvino, iyi ndeimwe yeiyo manejimendi manejimendi inogamuchira zvakanyanya (ndiyo inounza mari yepamusoro). Kubhadhara kwako kuri pagore, kunyangwe ichigona kuganhurwa muzvikamu zvinoverengeka kuitira kuti usabhadhare zvese kamwechete.
Maitiro eBI akaverengerwa
Iyo IBI hachisi chimwe chinhu chaunofanirwa kutarisira, nekuti Kanzuru yeGuta kwaunogara yatove nebasa rekumisikidza huwandu hweIBI inoenderana newe pamwe nekukuudza kana paine chero bhonasi iyo, otomatiki, inoishandisa kune chikamu chako.
Muzhinji, kuverenga iyo IBI kuziva iyo cadastral kukosha kweako chivakwa. Izvi zvinouya muGeneral Directorate yeCadastre, ruzhinji rejista uko zvivakwa zvese zvinovakwa zvinozivikanwa. Pachave nekuratidzwa mhando yepfuma, hunhu, pamusoro ...
Zvinoenderana neaya data, iyo imba inopihwa kukosha, iyo inonzi cadastral kukosha (iyo haina chekuita nemutengo wemusika weiyo chivakwa kana nemutengo wekutarisa). Kune iyo kukosha, iyo Kanzuru yeKanzuru inoshandisa muzana uye mhedzisiro inowanikwa ndiyo inofanirwa kubhadharwa. Zvisinei, kune mabhonasi anogona kuita kuti IBI ive yakachipa zvikuru.
Uye sei kuti uverenge iwe pachako? Zvayo:
Enda kuCatrastro kunokumbira yako cadastral kukosha kweiyo real estate.
Enda kuDhorobha rako reHoro kuti uone chiyero cheperesenti icho chinoiswa zvinoenderana necadastral yako kukosha uyezve mabhonasi anogona kuwanikwa.
Nyorera iwo maitiro kune iyo cadastral kukosha uye iwe uchawana iyo muripo unobhadharwa.
Iyo IBI chimwe chinhu icho varidzi ve real estate vanofanirwa kuchengeta. Zvino, kune vamwe vasingafanire kuribhadharira, senge chivakwa chiri cheHurumende, makambani emuno kana maAutonomous Communities, nzvimbo yekudzivirira, midziyo yeChechi yeKaturike, Red Cross, dzimbahwe rezvematongerwo enyika kana kana vachionekwa se yenhoroondo yenhaka.
Vamwe vese vanofanirwa kuteedzera gore rega rega nekubhadhara kwacho
Zvichienderana nematunhu, kubhadhara kunogona kuitwa pane rimwe zuva. Uye, kunyangwe ichifanira kubhadharwa mumwedzi wese, kune nzvimbo kwainoitirwa muna Ndira 1, kana munguva iri pakati paGumiguru naZvita. Naizvozvo, hatigone kukuudza zuva chairo rekubhadhara, nekuti zvinoenderana nekuti unogara kupi. Semuenzaniso, muMadrid, iyo IBI inobhadharwa pakati paGumiguru 1 naNovember 30.
Uyu mutero unogona kubhadharwa kamwechete kana kupatsanurwa kana kudzoserwa. Mune ino kesi, iri Kanzuru yeGuta iyo inogona kukurudzira akasiyana "marongero" ekubhadhara iyo IBI. Ehe, yeuka kuti, kana isina kubhadharwa munguva yekuzvidira, panogona kunge paine mari inosvika makumi maviri muzana inowedzera iyo yakatarwa huwandu hwakawanda.
Uye unobhadhara sei? Pane nzira dzinoverengeka dzekuzviita: neInternet, runhare, kutungamira mubhadharo, kana uri munhu.
Chimwe chinhu icho vazhinji vasingazive ndechekuti iyo IBI haisi mutero mumwe chete, muchokwadi, kune akati wandei marudzi emitero, kana chii chakafanana, zvinoenderana nerudzi rwemba iwe rwaunogona kubhadhara zvakanyanya kana zvishoma.
Izvi, zvisingazivikanwe nevazhinji, zvine chekuita nekuti kune dzimba dzemarudzi akasiyana siyana. Uye yega yega ine imwe mhando yerineni.
Nekudaro, iwe unogona kuwana zvinotevera:
Zvivakwa zvemaguta zvakasikwa. Mune ino kesi, inochengeta iyo IBI yemudhorobha, uye mairi mutero we0,479% unoshandiswa kune inotera base, pamusoro pekushandisa iyo mutero mabhenefiti kuitira kuti ipe kukwira kune yemvura mutero quota (mune mamwe mazwi, chii unofanira kubhadhara).
Imba yeiyo rustic hunhu. Pano iwe unofanirwa kubhadhara iyo rustic IBI, ndiko kuti, mutero wekuve neiyo rustic imba (kazhinji, guta). Mutero wayo wakakwirira kupfuura iyo yapfuura, 0,567%.
Pfuma ine hunhu hwakakosha. Iwo anonzi BICES uye iyo IBI yavanobhadhara ndeye yakasarudzika hunhu, nokudaro mutero wavo wakakwira zvakanyanya kupfuura iwo apfuura, 1,141%.
"Yakakosha" yemaguta real estate
Fungidzira iwe uine nzvimbo muguta. Izvi hazvishandiswe senzvimbo yekugara, asi kumisikidza shopu, bhawa, kushandisa mitambo, kuva nehofisi ... Zvakanaka, iyo IBI inonzwisisawo mashandisiro aya, uye kunze kwemutero watataura pamusoro pamusoro, kune mamwe akasarudzika zvinoenderana nekushandiswa kunoitwa ichi chakanaka.
Nekudaro, iwe unowana zvinotevera:
Kushandisa kwekutengesa. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kubhadhara iyo kana iyo cadastral kukosha kuri kupfuura 860.000 euros. Mutero wechuru ndeye 0,985%.
Kushandiswa kwekuzorora uye kugamuchira vaeni. Iko kukosha kwecadastral kunofanirwa kuve kwakakura kupfuura 1.625.000 euros uye ichave nemutero we1,135%.
Industrial kushandiswa. Iko kukosha kwecadastral kunofanira kupfuura 890.000 euros uye ichave nemutero we1,135%.
Kushandiswa kwemitambo. Kunze kwekuti iyo cadastral kukosha inodarika 20.000.000 euros. Nhema dzako? 1,135%.
Kushandiswa kwemahofisi. Kana iyo cadastral kukosha ikapfuura 2.040.000 euros, mutero wekushandisa unove 1,135%.
Kushandisa imba yekuchengetera uye kupaka. Chero bedzi paine kukosha kwecadastral kwakakura kupfuura 1.200.000 euros, iyo mutero ichave 1,135%.
Kushandisa utsanana. Zvekushandisa kwehutsanana, mutero we1,135% uchaiswa kana iyo cadastral kukosha kuri pamusoro kupfuura 8.900.000 euros.
Kushandiswa kwe "singular" chivakwa. Mune ino kesi, iyo cadastral kukosha ichave yakakura kupfuura 35.000.000 euros uye ichave iine yakanyanya kukwirisa mutero, 1,294%.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Mitero » Chii chinonzi IBI
Mitero isina kunanga